Manaova fampielezana mailaka mahomby amin'ny fampidirana Mailchimp
Mailchimp sy Zeevou fampidirana
Ny marketing amin'ny mailaka dia fomba iray mahomby amin'ny fampitana ny hafatrao amin'ny mpihaino marobe, mahita vahiny vaovao ho an'ny fanofana trano fohy mandritra ny fotoana fohy eo am-pampaherezana ireo vahiny taloha mba hamandrika mivantana aminao na dia nametraka famandrihana tamin'ny sehatra OTA na famandrihana aza izy ireo. Ny fampidirana an'i Zeevou sy Mailchimp dia manamora ho anao ny mamorona fanentanana amin'ny mailaka mahazatra sy mandeha ho azy. Na dia Zeevou aza tsy mifandray mivantana amin'i Mailchimp, Zapier manao, mba hahafahanao mampifandray ny rafitrao amin'ny Mailchimp sy ento any amin'ny ambaratonga manaraka ny ezaka marketing anao. Miaraka amin'ny onjam-piasa mandeha ho azy Zapier — izay antsoina hoe Zaps — azonao atao ny mijanona tsy manahy intsony momba ny fandikilàna ny mombamomba anao ao anaty lisitry ny mailakao ary hifantoka bebe kokoa amin'ny fananganana orinasanao.
Alefaso ny adiresy mailaka ataon'ny vahininao
Mamorona tahiry fampahalalana mifandraika amin'ny vahinin'ny vahiny momba ny GDPR
Manaova fampielezana marketing amin'ny mailaka tsy tapaka sy mandeha ho azy
Avereno lasibatra ireo mpamandrika OTA ary mampitombo ny fiovam-po mivantana
misoratra anarana amin'i Mailchimp